Lynda.com မှ Tutorials movie များ - Page2- မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်
မြန်မာမိသားစုဖိုရမ် » ..:: ကွန်ပျူတာနယ်ပယ် ::.. » Applications, Operating Systems & E-books » E-Books & Tutorials
Lynda.com မှ Tutorials movie များ
E-Books & Tutorials Sharing of E-books & Tutorials
15-02-2010, 04:03 AM
ပို့စ် 44 ခုအတွက် 163 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ပြန်စာ - Lynda.com မှ Tutorials movie များ
Lynda.com – MySQL Essential Training DVD
Lynda.com – MySQL Essential Training | 188MB | RS & HF | Release Date:08-04-2009
MySQL is by far the most popular database management system for
small- to medium-sized web projects. In MySQL Essential Training,
instructor Bill Weinman provides clear, concise instruction in
the tools needed to create and maintainadatabase. Bill explores
the different data types MySQL supports, and the functions it
provides, enabling the user to get the most out of them. He even
shows the MySQL PHP interfaces that can be used to create web
applications. Exercise files accompany the course.
အောက်ပါအသင်းဝင်7ဦးတို့မှ specialspecial အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုရင်ပြည့်စုံ, ဇာနည်မောင်, ပန်းသီးလေး, လင်းထိန်, လမ်းပြကြယ်, chit moe oo, zo
Find More Posts by specialspecial
22-02-2010, 10:01 AM
ပို့စ်9ခုအတွက် 15 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ဇစ်ဖိုင်တွေက တစ်ချို့ဟာတွေ ဖွင့်လို့မရဘူး
Find More Posts by လေးလေးနွယ်
22-02-2010, 09:34 PM
အသင်းဝင်နေ့စွဲ: Nov 2008
ပို့စ် 451 ခုအတွက် 3,289 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ဘယ်လိုမျိုး zip file ကိုဖွင့်မရဒါလေးခင်ဗျာ..ကျနော့်ဒေါင်းပြီး
အဆင်မပြေလောက်ဘူးဗျ.. ၄ ပိုင်းစလုံးကိုဒေါင်း folder တခုထဲကိုထည့်
ပြီးရင် part 1 ပေါ်မှာ right click ထောက်ပြီး.. extract here ပေးလိုက်ရင်ရပါပီ..
winrar ကို install လုပ်ထားဖိုးလိုပါမယ်..
ရလာတဲ့ file type တွေက .mov တွေပါ..
အဲဒါကိုလည်း jetaudio plus 8.0 နဲ့ဖွင့်ရင် အဆင်ပြေပါတယ်..
jetaudio plus 8.0 လိုချင်ရင် အောက်မှာယူပါ..
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ kyaukphyu အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by kyaukphyu
01-03-2010, 11:10 AM
အိုင်ဖိုင်နဲ့ ပြန်ပြင်ပေးမယ်ဆိုပြီး ပြင်လည်းမပြင်ပေးဘူး
နောက်ပြီး ဖိုင်တွေက တစ်ခုမှလည်း ဒေါင်းရတာ အဆင်မပြေဘူး
02-03-2010, 05:04 AM
ရှေ့ပိုင်းပို့စ်တွေမှာ ကိုရဲအောင် ifile လင့်ခ်ဖြည့်ပေးထားပါတယ်။
လိုချင်တာကိုတောင်းဆိုဖို့ ပို့စ်နံပါတ်(၂၈) မှာပြောထားပါတယ်။
အကုန်လုံး လင့်ခ် change ပေးဖို့ မလွယ်လို့ ညီမလိုချင်တဲ့ဖိုင်ကို ပို့စ်နံပါတ်ညွှန်း၍ဖြစ်စေ quote လုပ်၍ဖြစ်စေ ပြောပေးပါ။
အဆင်ပြေတဲ့သူ လင့်ခ် change ပေးပါလိမ့်မယ်။
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ tu tu အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
05-03-2010, 07:56 AM
08-03-2010, 10:41 AM
ပို့စ် 32 ခုအတွက် 106 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
Originally Posted by ညီနေမင်း
Total Training & Lynda.com for PhotoShop
အဲဒိက အပိုင်း ၁၊၂၊၆၊၇ ကို ifile ကနေပြန်တင်ပေးပါဗျာ... ကျနော်ဆွဲတာ မရလို့... ကူညီပါဦး... tu tu ရေ ကူပါဦးနော်... ကျနော်ကိုအမြဲတမ်းကူညီနေကြလေ... mediafire ကဆိုလည်းရပါတယ်... အဲဒိမှာပါတဲ့ mediafire က လင့်သေနေပြီ... ရထားတဲ့ဖိုင်အားလုံးကို megaupload ကနေယူထားတာ... အဲဒိကောင်က အခု4ဖိုင်ကိုမပေးတော့လို့... မူရင်းလင့် rapid ကလည်; error ပြနေတယ်... ကူညီပါဗျာ..
Visit mars's homepage!
08-03-2010, 03:51 PM
အဲဒိက အပိုင်း ၁၊၂၊၆၊၇ ကို ifile ကနေပြန်တင်ပေးပါဗျာ...
11-03-2010, 09:58 AM
့ဖိုတိုရှော့ စီအပ် ဖိုး တွေအကုန်လုံးကိုပြောတာလေ
14-03-2010, 03:53 PM
Originally Posted by လေးလေးနွယ်
မအားတာရော၊ connection မကောင်းတာကြောင့်ရော စိတ်သွားတိုင်း ကိုယ်မပါလို့ပါ ညီမရေ...
အောက်ကပို့စ်မှာ ifile လင့်ခ်အားလုံး ဖြည့်ပေးထားပါတယ်။
ကျန်တာတွေတော့ လာမယ် ကြာမယ်ပေါ့နော်။
လိုချင်တာလေး ဦးစားပေးပြောပေးရင် ပိုအဆင်ပြေမယ်။
ဘယ်ပို့စ်ကဖိုင်ကို အရင်တင်ပေးပါ ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်။
16-03-2010, 02:01 PM
ဒါဆိုရင် အက်စက် ၂၀၀၇ ရယ် ဖလပ်ရှ် ရယ် ၊ ဖားယားဝေါလ် ရယ်ကို အိုင်ဖိုင်ပြောင်းပေးပါနော်....
23-09-2010, 11:35 AM
ပို့စ် 1 ခုအတွက် 1 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
wordpress နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ video တွေမ၇ှိဘူးလား ခင်ညာ ၇ှိ၇င် မျှပေးကြပါ အုံး ခင်ညာ
Find More Posts by $tr!k3r
27-09-2010, 11:11 AM
ကဲ ကျွန်တော်တို့ Joomla! 1.5 Essential Training နဲ့ စလိုက်ကြရအောင်ဗျာ .. နော့
media fire မှာ trainning part3က လင့်နစ်ခု ထပ်နေတယ်ဗျ trainning.part4 မပါဘူး trainning part4လင့်လေး ပြန်တင်ပေးပါဗျာ ကျနော ifile ကရော rapidshare ကေ၇ာ ဆွဲလို့မ၇ဘူး mediafire ကနေပဲ အဆင်ပြေနေလို့ trainning part4လင့်က မပါဘူး ပြန်တင်ပေးပါဗျာ ကျေးဇူးတယ်ပါတယ်
Last edited by tu tu; 27-09-2010 at 12:48 PM.. Reason: edit quote
27-09-2010, 11:54 AM
ပို့စ် 133 ခုအတွက် 759 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ကဲ $tr!k3r ရေ အိုင်ဖိုင် ကဆွဲလို့မရဘူးဆိုလို့ ကျနော်ဆွဲပြီးပြန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
မီဒီယာဖိုင်းယားက ဒေါင်းထားတဲ့ဖိုင်နဲ့ ပြန်ပေါင်းလို့ရတယ်နော်။ Part4တစ်ခုထဲကိုပဲပြန်တင်လိုက်ပါတယ်။
ဖိုဒါ တစ်ခုထဲမှာပဲ ပေါင်းပြီးတော့ပြန်ဖြည်လိုက်ပေါ့။ အဆင်ပြေပါစေဗျာ။။။။။။
စကားသစ္စာ မှန်သောခါဝယ် သြဇာလေးနက် ပေါ်ဆီတက်၍ နွယ်မြက်သစ်ပင် ဆေးဖက်ဝင်၏။
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ amaung344 အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
$tr!k3r, Emc Arkar, tu tu
Find More Posts by amaung344
27-09-2010, 06:06 PM
Originally Posted by specialspecial
ဖိုင်တွေ ဒေါင်းလို. မရတော.ဘူး။အဆင်ပြေရင် လင်.လေးတွေ ပြန်ပြင်ပေးပါဦး ခင်ဗျာ..
27-09-2010, 10:50 PM
ကို amaung344 ကျေးဇူးပါပဲဗျာ ဒေါင်းပီးသွားပါပီ ဖိုင်တွေတခုပီတခုဖြည်ပီ video ဖွင့်လိုက်၇င် script runtime error : Property not found ဆိုပီး ဖွင့်လို့မ၇ဘူးဗျ ဆက်လက်ကူညီပေးပါဦးဗျာ
28-09-2010, 08:19 AM
ဒေါင်းပြီးသွားရင်ဖွင့်လို့ရပါတယ် ငါ့ညီရေ။ ကိုလည်း ညီတောင်းလို့ မီဒီယာဖိုင်းယားက ၄ ဖိုင်နဲ့ အိုင်ဖိုင်က ၁ ဖိုင်ကိုဒေါင်းဖိုဒါတစ်ခုထဲမှာထည့်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့မှ ဖြည်လိုက်တာ အောက်ကပုံတွေလိုရတယ်။ ကြည့်လိုက် ပါအုံးဗျာ။။။။
Lynda.com folder ကိုရွေးပြီးဖွင့်လိုက်ပါ။။
Movies Folder ကိုရွေးပေးပါ။။
movies ထဲမှာ chapter အလိုက်ရှိနေပါတယ်။ chap00 ကတော့ intro လေးပေါ့။ သူ့ကိုဖွင့်လိုက်ရင်
videos file ၃ ဖိုင်ပါလာလိမ့်မယ်လေ။ window media player လေးနဲ့ ကျနော်ဖွင့်လိုက်တော့ အောက်ကပုံလေး လိုပေါ်လာပြီးရှင်းပြနေပါပြီ။
အောက်ပါအသင်းဝင်4ဦးတို့မှ amaung344 အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
$tr!k3r, ဖြိုးယံလေး, tu tu, zo
28-09-2010, 01:30 PM
Originally Posted by amaung344
ဟုတ်၇တွားပီ အကို အခုလို စိတ်၇ှည်လက်၇ှည် ၇ှင်းပြပေးတာ ကျေးဇူးပါပဲ ခင်ညာ
Last edited by tu tu; 28-09-2010 at 04:15 PM.. Reason: edit quote
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ $tr!k3r အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
06-10-2010, 10:10 PM
Joomla! Creating and Editing Custom Templates CD
Full Version with Original GUI
Format: FULL CD Version (Video + Exercise files + Original GUI)
Released on: 12/02/2008
ဒီဟာလေးကိုလဲ mediafire ကနေပြန်တင်ပေးပါဗျာ ဒေါင်းလို့မ၇လို့ပါ
06-10-2010, 11:31 PM
ပို့စ် 331 ခုအတွက် 1,446 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ကိုညီနေမင်း တင်ထားတဲ့ဖိုင်ကိုဘဲ Mediafire ကနေ တစ်ဆင့် ပြန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ် ...
Share everything i got on Internet.All my Entries not my own.I just Search and Share to everyone.Contact me if you have any Question!!! ^_^ yannainghtun43084@gmail.com
If any of my links no longer work, please send PM to let me know !
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ ko myo အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
လမ်းပြကြယ်, amaung344, tu tu
ko myo ထံသို့စာချွန်လွှာပို့ရန်
Find More Posts by ko myo
Photoshop has become an indispensible tool for photographers, designers, and all other creative professionals, as well as students. Photoshop CS4 Essential Training teachesabroad spectrum of core skills that are common to many creative fields: working with layers and selections; adjusting, manipulating, and retouching photos; painting; adding text; automating; preparing files for output; and more. Instructor Jan Kabili demonstrates established techniques as well as those made possible by some of the new features unique to Photoshop CS4. This course is indispensable to those who are new to the application, just learning this version, or expanding their skills. Example files accompany the course.
သူကတော့ (၂)နေရာပေးထားတယ် အတူတူပါပဲ . ပထမဟာက မူရင်းဖိုင်တင်တဲ့နေရာ ဒုတိယက သူ့ရဲ့ link ခွဲတွေကို တစ်ခုချင်းစီ ခွဲချပေးထားတာပါ .
အောက်ကဟာက lynda.com ရဲ့ မူရင်း ဖိုင်တင်တဲ့ page ပါပဲ .
ဒီ rapidshare လင့်တွေကို mediafire ပြောင်းပေးပါလားဗျာ rapidshare နဲ့ အခက်အခဲ ဖြစ်နေလို့ပါ ကူညီကြပါဗျာ
29-11-2010, 06:52 PM
Originally Posted by $tr!k3r
အကိုရေ cs4တွက်တော့ ညီလေးမှာ မရှိဘူး cs 5တွက်တော့ရှိတယ် ဗျာ
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ သန့်ဇင်ဌေး အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
29-11-2010, 08:20 PM
Originally Posted by နေဦးသစ်
ဟုတ်ကဲ့ ပိုကောင်းတာပေ့ါဗျာ cs5 ဆိုတော့ mediafire မှာပဲတင်ပေးပါဗျာ rapidshare ကအဆင်မပြေလို့ပါ
30-11-2010, 10:08 PM
ပို့စ် 1,058 ခုအတွက် 6,027 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ကျနော်လဲ cs5 ကိုစောင်.နေပါတယ်အကို။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။စောင်.နေမယ်နော်။
cs5 full version ကို free ၇ထားတာ ၁လတောင်ကျော်နေပြီ ။တခါမှ မထိ၇သေးတာ။
အခုတော.ေ၇ငတ်တုန်း ဧ၇ာဝတီမြစ်ထဲကျ သလို ဖြစ်သလိုပေါ.။
17-08-2017, 03:53 AM
Windows7 အသုံးပြုနေတဲ့ မိသားစုတွေအတွက် အီးလိုသင်ပေးတာဖြစ်ပေမယ့် ဗွီဒီယိုဖိုင်နဲ့မို့လို့ လိုက်လေ့လာရတာ အဆင်ပြေမှာပါ။
Lynda Windows7Training ပါ။
2.Upgrading and Migrating
5.Music, Photos, Videos
6.Other Windows Accessories
8.Device and Networking
11.Backing up and Troubleshooting
12.Internet Explorer 8
13.Windows Live Essentials
28-08-2017, 08:44 PM
အသင်းဝင်နေ့စွဲ: May 2010
ပို့စ်2ခုအတွက်2ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
VBA Macro programming နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ tutorials လေးတွေ ရှိရင် တင်ပေးနိုင်မလားရှင့်..
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ အေးဝတ်မှုန် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by အေးဝတ်မှုန်
Originally Posted by အေးဝတ်မှုန်
Macro ကို Excel သုံးပြီး အသေးစိတ်ရှင်းပြထားပါတယ်။
Lynda: Excel 2016- Macros in Depth
02.RunningaMacro
04.RecordingaMacro in Stages
05.Creating Nonrecordable VBA Code
06.Macro Project: ConvertingaMailing List intoaDatabase List
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ zo အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
စာလုံးကို ရေခဲရည် ပျော်ကျနေအောင် လုပ်မယ် မင်းကိုထွေး ဆွေးနွေးချက်များ012-01-2009 07:13 AM
ဖိုရမ်၏ ပင်မအချိန်သည် ဂရင်းနစ်စံတော်ချိန် +6.5 ဖြစ်သည်။ဒေသစံတော်ချိန် 09:55 AM